Abavelisi nabaThengisi beeNdawo eziSelfowni | China Iselfowuni ekhokelwa yiTrailer yefektri
I-Jingchuan 4㎡ itreyila ye-LED ephathekayo （Imodeli: E-F4） ibizwa ngokuba "ngoongqatyana bancinci, kodwa banamalungu amahlanu", kwaye ibizwa ngokuba yi "BMW mini" kuthotho lweetreyila zejingchuan.
I-JCT 6m2 itreyila ye-LED eshukumayo （Imodeli: E-F6） yimveliso entsha yothotho lwenqwelomoya olusungulwe yinkampani yeJingChuan ngo-2018. Ngokusekwe kwitreyila ekhokelayo ehamba phambili e-E-F4, i-E-F6 yongeza indawo engaphezulu kwesikrini se-LED kwaye yenza ubungakanani besikrini 3200 mm x 1920 mm. Kodwa xa kuthelekiswa nezinye iimveliso kuthotho lweetreyila, inobungakanani bescreen esincinci.
I-12㎡ iTrailer ehamba ngeFowuni
I-JCT 12㎡mobile ye-trailer ye-LED eyaqala ukubonakala ngo-Septemba ngo-2015, umboniso we-LED wamazwe aphesheya, xa ukubonakala kwayo kuye kwatsala umdla wabakhenkethi abaninzi ekhaya nakumazwe aphesheya. Isitiriyo sangaphandle, ngokuhambelana noyilo lwembonakalo yelizwe jikelele
I-16㎡ iTrailer ekhokelwa siselfowuni
I-JCT 16m2 itreyila ye-LED eshukumayo （Imodeli: E-F16） isungulwe yinkampani yejingchuan ukuze ihlangabezane neemfuno zabathengi basekhaya nabangaphandle. Ubungakanani besikrini se-5120mm * 3200mm bunokuhlangabezana neemfuno zabathengi kwiscreen esikhulu.
22㎡ Itreyila ekhokelwayo eshukumayo
Uyilo lwe-JCT 22m2 itreyila ye-LED eshukumayo （Imodeli: E-F22） iphefumlelwe yiBumblebee kwi-movie "Transformers". Ngombala oqaqambileyo otyheli, itreyila yetreyisi ibanzi kakhulu kwaye igcwele ngolawulo.
Uhlobo lwe-Scissor Type LED Trailer
Uhlobo lwe-scissor lwe-JCT 12㎡ lwe-trailer ye-mobile yokuqala ngo-2007 yaqala ukuphanda kunye nophuhliso, kwaye yafakwa kwimveliso, emva kweminyaka emininzi yobugcisa ikhula ngokuqhubekekayo, sele ingoyena mntu uqolileyo kwinkampani ye-taizhou JingChuan yenye yezona zakudala
Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck, Ekhokelwayo Inqwelo erhuqwayo, Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile,